Ahoana ny fomba hampiasana azy ho azy? Aza manelingelina rehefa mitondra fiara | Vaovao IPhone
Aza manelingelina ny maody amin'ny fomba mandeha rehefa mandeha ny fiara
Ankehitriny amin'ny fahavaratra isika ary mety noho ny COVID-19 dia mikasa ny hanao dia lavitra miaraka amin'ny fiaranao ianao, zava-dehibe ny hamelanao ny findainao finday avo lenta ary inona tsara kokoa noho ny mampihetsika dia aza manelingelina ny maody rehefa mandeha ho azy ny fiara rehefa miditra ao anaty fiara ianao dia manara-maso hatrany ny arabe.
Matetika io safidy io dia tsy mandeha amin'ny iPhone ary hampavitrika azy dia mila manaraka dingana vitsivitsy izay hasehonay anao eto ambany izahay. Raha manana CarPlay ao anaty fiara ianao dia azonao atao ny mampihetsika ny safidy hanaovana azy isaky ny mampiasa azy ianao.
Aza manelingelina ny maody amin'ny fomba mandeha ho azy ny fomba fampiasana
Safidy mora entina io ary azo antoka fa mamporisika ny hihetsika ho an'ireo izay mampiasa fiara tsy tapaka. Mila miditra fotsiny ianao Fikirana IPhone, fidio ny safidy "Aza manelingelina" ary tadiavo ilay safidy "Aza manelingelina ny maody rehefa mitondra fiara". Eto dia manana safidy telo hisafidianana isika:
Rehefa mifandray amin'ny Bluetooth an'ny fiara
Raha ny lojika, ny safidy mahaliana anao indrindra dia mety ho ny voalohany na faharoa, fa koa eo amin'ny farany ambany amin'ireo safidy telo ireo dia hitantsika ilay mamela anao hampihetsika ny asany rehefa mampifandray amin'ny CarPlay, noho izany dia ampidininay fotsiny ilay safidy ary dia izay , Rehefa mampifandray ny iPhone amin'ny taribin'ny fiaranay izahay dia hampandeha ny asan'ny Aza manelingelina.
Zava-dehibe ny fahalalana izany ho fanampin'izany azontsika atao ny manitsy ny valiny mandeha ho azy amin'ireo sakaizinay ankafizinay, na iza na iza, vao haingana na rehetra rehefa mandefa hafatra an-tsoratra ho antsika izy ireo. Ny valiny mandeha ho azy namboarin'i Apple dia manazava fa mitondra fiara amin'ny maody tsy hanelingelina sy ny sisa isika, saingy afaka manitsy an'ity hafatra ity araka izay tiantsika.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » iPhone » IPhone Security » Aza manelingelina ny maody amin'ny fomba mandeha rehefa mandeha ny fiara
Ny Face ID dia afaka mametraka ny sarin'ny lalan'ny mpampiasa amin'ny ho avy mba hisorohana ny fifanjevoana eo amin'ny zaza kambana
UK dia mahita olana amin'ny fifanarahana Google amin'ny Apple ho motera fikarohana tsy mandeha amin'ny laoniny